Imisebenzi yobugcisa ye-15 yeHalloween yokwenza ixesha elothusayo | Imisebenzi yezandla
15 Halloween yezandla ukuba nexesha elimnandi
Isabel Catalan | 14/10/2021 18:00 | Imisebenzi yeHalloween, Imisebenzi yezandla zabantwana
IHalloween iyeza kwaye lixesha lokuba ulungele ukubhiyozela ngesitayile! Njani ngokuthatha ithuba lokwenza ezinye Imisebenzi yeHalloween amantombazana amakhulu anokuhombisa ngawo indlu kwaye abe nexesha lokuzonwabisa? Kule posi sijonga ezinye zezona zinto zingumsebenzi wobugcisa wokwenza ezi holide. Sukuphoswa yiyo!
1 Bat clip kunye nezinye iindlela zokubhiyozela iHalloween kulo nyaka
2 Igqwirha laphoswa phezu komnyango - ubugcisa obulula beHalloween
3 Umtshayelo wegqwirha
4 Ikati emnyama enekhadibhodi
5 Ukusonga iitshokholethi zeHalloween
6 Umama wekhadibhodi emnyama yeHalloween
7 Igolide yeHalloween yokwenza nabantwana
8 Ipakethe yeMonster yokunika ilekese kwiHalloween
9 Umama olula weHalloween wokwenza nabantwana
10 Isiphatho sekhandlela seHalloween esimile njengomama
11 Imincili yolly yeHalloween
12 Iipopcorn zeHalloween
13 Ikhadi elimnandi lekhadibhodi
14 Ikati yeHalloween
15 Umnqwazi omncinci weHalloween
Bat clip kunye nezinye iindlela zokubhiyozela iHalloween kulo nyaka
Siqala ngale nto ilulwane bat, yenye yezona zinto zilula zeHalloween onokuzilungiselela ngokukhawuleza kunye nezinto osele unazo ekhaya ezinje ngeempahla zomthi ezenziwe ngomthi, amakishayo amnyama, ikhadibhodi emnyama, isikere, amehlo ezinto zobugcisa kunye nompu wesilicone.
Ungayisebenzisa le clip ye-bat njengomzekelo ukuxhoma amakhethini endlu, ukuxhoma iimpahla kwintambo yokunxiba okanye ukuhombisa iincwadana, phakathi kwezinye izinto ezininzi. Kwiposi Bat clip kunye nezinye iindlela zokubhiyozela iHalloween kulo nyaka uza kubona imiyalelo yokwenza.
Igqwirha laphoswa phezu komnyango - ubugcisa obulula beHalloween
Omnye wamagqwirha yenye yemixholo edityaniswe kakhulu nepati yeHalloween. Kungenxa yoko le nto ingenakuphuthelwa kuluhlu. Ndizisa enye yezobugcisa obuhle kakhulu beHalloween onokuyilungiselela ngeli xesha lonyaka kwaye onokumangalisa ngazo iindwendwe zakho ukuba ubhiyozela itheko ekhaya. Ndiyathetha oku kuhlekisayo ityotyathi elityumkileyo elimile okwegqwirha, yenye yezona zinto zilula ukuzenza ekhaya.
Uya kudinga kuphela izihlangu kunye neekawusi, izinto ezinokufakwa emgodini kunye nomatshini wokomisa unyawo. Ukubona ukuba kwenziwa njani ndincoma ukuba ufunde iposti Igqwirha lityumze umlenze apho uya kufumana inyathelo ngenyathelo.
Omnye umhombiso ongalahlekiyo ekhaya ukubhiyozela lo mhla ubalulekileyo ngumtshayelo wegqwirha. Ukuba ufuna ukunika ukubamba okwahlukileyo kumhombiso wendlu, ndicebisa ukuba uphinde uyenze le nto Umtshayelo wegqwirha ongazukufuna zixhobo zininzi. Ngapha koko, kufuneka ubambe amasebe ambalwa kunye neribhoni ukuze uzibophelele. Kulula oko!
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukubona ukuba kwenziwa njani ngokweenkcukacha, ndikucebisa ukuba ufunde iposti Umtshayelo wegqwirha ukuhombisa ngeHalloween.
Ikati emnyama enekhadibhodi
Isilwanyana esithandayo samagqwirha asinakuphoswa kolu luhlu lwezinto zeHalloween. Yinto yodidi kwaye abantwana baya kuthanda ukuthatha inxaxheba kumhombiso wendlu ngokwenza oku kuhle ikati emnyama abanokubeka emagumbini abo. Yenziwe ngejiffy kwaye kulula kakhulu. Ukongeza, icace gca ecaleni komtshayelo endikubonisa wona kubugcisa bangaphambili.
Njengempahla kuya kufuneka uthabathe ikhadibhodi emnyama kunye nomnye umbala owuthandayo, ubuchule bamehlo, iglu kunye nezikere. Uyayibona ukuba yenziwa njani kwisithuba Ikati emnyama enekhadibhodi. Uyakuyithanda!
Ukusonga iitshokholethi zeHalloween
Abantwana bathanda ilekese kunye netshokholethi. IHalloween lixesha elimnandi lokuvumela ukucinga kwakho kusebenze ngokungalawulekiyo kwaye ulungiselele iilekese ezinemilo ngokomxholo. Umzekelo this vampire jonga ukusonga ukubonisa iitshokholethi. Uya kumangaliswa kokubini abantwana kunye nabantu abadala!
Le yenye yezobugcisa zaseHalloween ongazukufuna zixhobo ezininzi. Ikhadi elimnyama kunye nemaroon, amehlo obugcisa, intonga yeglue, ibha yetshokholethi, kunye nezikere ziya kwanela. Kulula oko! Ukuba ufuna ukubona ukuba yenziwa njani inyathelo ngenyathelo, ungaphoswa ngumyalezo Ukusonga iitshokholethi zeHalloween.
Olunye uphawu oluqhelekileyo kwindalo yonke yeHalloween zizidumbu. Ukuba ulungiselela ubugcisa obuninzi beHalloween kulo nyaka, lo ngekhe alahleke kuluhlu lwakho! Yi Ikhadibhodi emnyama yomama ilula ukuyenza kwaye ukuyenza akuyi kufuna zixhobo zininzi, nje ikhadibhodi emnyama emnyama, ipensile, irabha, uboya obumhlophe, amehlo ezobugcisa, iglu, isikere kunye neteyipu.
Ukuba ufuna ukwazi ngokweenkcukacha imiyalelo yalo msebenzi wobugcisa, ndincoma ukuba ufunde iposti Umama wekhadibhodi emnyama yeHalloween.
Ukuba ufuna ubugcisa beHalloween ngenxa yokuba uceba ukuphosa ipati, le garland iya kukunceda uhombise igumbi oya kuthi ubhiyozele kulo. Kulula kakhulu ukwenza kwaye kufanelekile ukuba abantwana bathathe inxaxheba kwaye basebenzisane nemihombiso yeqela.
Izixhobo oza kuzifuna ukulungiselela oku Isithsaba esihlekisayo Iphepha lokwakha elimnyama nelorenji, iteyiphu, iipensile, isikere, irabha, kunye nomtya omhlophe. Ukuba ufuna ukubona ukuba kwenziwa njani, ungathandabuzi ukucofa iposti Igolide yeHalloween yokwenza nabantwana Apho uya kufumana iinkcukacha ngenyathelo ngenyathelo.
Enye indlela yokumangalisa abantwana ngexesha lepati yeHalloween kukwenza kunye nokusasaza le phakheji intle emilise okwerhorho equlethe iilekese. Baza kuyithanda! Bona ngokwabo banokuthatha inxaxheba kulungiselelo lwayo kwaye babangenise kwezinye iindwendwe ngexesha lepati.
Ukwenza oku ipakethe yesilo esikhulu Uya kudinga izinto ezimbalwa kuphela: ikhadibhodi evela kwiphepha lendlu yangasese, amehlo wobugcisa, ikhadibhodi enemibala, isikere kunye nompu oshushu weglue. Fumanisa ukuba yenziwa njani eposini Ipakethe yeMonster yokunika ilekese kwiHalloween.
Lo mama ungomnye wobugcisa beHalloween ngokulula kangangokuba nabantwana banokuzenzela ngokwabo. Baya kuba nexesha elonwabisayo kakhulu lokwenza oku Umama ukuhombisa igumbi lakho okanye nayiphi enye ikona yendlu.
Ukwenza obu bugcisa, ungasebenzisa ezinye zezinto osele unazo ekhaya ezivela kwezinye izinto zangaphambili, ezinjengeebhokisi zephepha langasese, amehlo ahambayo, umqulu wentambo emhlophe, isikere, ipensile kunye netheyiphu. Ukubona ukuba kwenziwa njani, ungaphoswa yile post Umama olula weHalloween wokwenza nabantwana.
Ukuhombisa amagumbi endlu kwaye uyinike into ekuthiwa sisiporho, ucinga ntoni ngokwenza oku kuphethe ikhandlela elipholileyo ngokumila komzimba?
Enye yezona zinto zintle kwaye zilula zeHalloween ukuzilungiselela. Njengezixhobo zoku isiphatho sekhandlela Kuya kufuneka ufumane ingqayi yeglasi, iibhandeji, amanye amakhandlela, amehlo ezobugcisa kunye nompu oshushu weglue. Kulula oko! Ukubona ukuba le mama yenziwe njani, jonga iposti Isiphatho sekhandlela seHalloween esimile njengomama.
Le yenye yezona zinto zilula zeHalloween ukuzilungiselela nabantwana. Kuqala kuyakufuneka batye iipopu ezimbalwa kwaye ngeentonga eziseleyo banokulungiselela olu lonwabo ubugcisa obuhle be-monster. Baza kuba nokudubula ngokuqinisekileyo!
Ezinye izinto zokwenza obu bugcisa zihamba ngamehlo, iglu, isikere, umona, umtya omhlophe, amakishayo anemibala. Uyayibona ukuba yenziwa njani ngeposi Imincili yolly yeHalloween.
I-classic engenakuze iphoswe naliphi na iqela le-Halloween ziingxowa ze Iipopcorn ezinomxholo. Le ikwimo yamathambo. Kulula kakhulu ukuzilungiselela, kuba oku kuya kudinga iipopu ezimbalwa, iphepha elikhanyayo, isaphetha sokubopha iphakheji kunye nokumakisha okumnyama ukupeyinta ukakayi.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukubona ukuba yenziwa njani inyathelo ngenyathelo ndikucebisa ukuba ufunde iposti Iipopcorn zeHalloween. Uya kubalungiselela kwi-jiffy!
Ikhadi elimnandi lekhadibhodi
Ukuba unamaphepha amancinci ekhadibhodi asekhaya kwaye ufuna ukuthatha ithuba labo lokwenza ubugcisa, kulungile ikhadibhodi bat Ingumbono olungileyo ukuhombisa amagumbi endlu. Sebenzisa iphepha lokwakha elimnyama, elimhlophe, elimthubi, isikere, iglu, isiphawuli, kunye ne-powder blush encinci. Iziphumo ziya kuba nkulu!
Ukuba ufuna ukubona ukuba yenziwe njani, cofa iposti I-bat ehlekisayo yokwenza ngeHalloween kunye nabantwana.
El ikati emnyama Sisilwanyana esaziwa ngokwesiko kunye neHalloween kwaye sinika umdlalo omninzi wokuhombisa iqela lolu hlobo. Ukuba uyazithanda ezi zilwanyana, lo ngumsebenzi wobugcisa onokuzonwabisa ngawo. Akunzima kakhulu ukuyenza kodwa ifuna ukuhoya iinkcukacha ukuyenza ibonakale ilungile.
Ukuyila uyakufuna izinto ezimbalwa (ikhadibhodi enemibala, iipeni ezimnyama, ikhampasi, izicoci zombhobho ezimhlophe, isikere, ipensile, uphawu olumnyama, njl. Njl. Ukongeza, unokuyixhoma naphina endlwini ukuze ibonakale intle nasemnyango. Ukuba ungathanda ukubona ezinye izinto kunye nevidiyo ebonisa ukuba le kati yenziwa njani inyathelo ngenyathelo, jonga iposti Ikati yeHalloween.
NgeHalloween awunakuphosa umnqwazi wobugqwirha! Ungayenza ekhaya ngezinto ozigcinileyo ukusuka kwezinye iimeko kwaye abantwana baya kuthanda ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yokuvelisa kuba le mveliso kulula ukuyenza.
Ukwenza oku umnqwazi wobugqwirha ngobuso besele uzakufuna kuphela izinto ezimbalwa: ikhadibhodi emnyama, irabha egwebu ngemibala eyahlukeneyo, ipensile, isikere, ikhampasi kunye nezinye izinto. Ukuba ufuna ukwazi zonke izinto kunye nemiyalelo yokwenza le hat yomlingo, ungaphoswa yile post Umnqwazi omncinci weHalloween. Iya kuba yenye yezobugcisa zaseHalloween abantwana abazokuzithanda kakhulu!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla zabantwana » 15 Halloween yezandla ukuba nexesha elimnandi